आफ्नो हृदयको आवाजलाई कसरी सुन्ने ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ फाल्गुन २३, आईतवार ०८:५८ गते
‘अढाइ अक्षर प्रेमको’ भन्नुको तात्पर्य के हो ! हामीले जति धेरै पुस्तक अध्ययन गरे पनि सिक्न नसकिने त्यस्तोे चीज के छ ? त्यसका बारेमा हामीले जतिसुकै अध्ययन गरे पनि बुझ्न सक्दैनौँ । कतिपय चीजलाई बुझ्नका लागि हामीले एउटा कुरा अवश्य सिक्नुपर्ने हुन्छ । यो अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो । धनी को हो अनि गरिब को हो ? यसका बारेमा तपाईंको परिभाषा, तपाईंको व्याख्या के छ ? जोसँग पैसा छैन उसलाई हामी गरिब भनेर बुझ्छौँ । कसरी ? पैसा त मानिसले नै बनायो । त्यसको बाँडफाँट पनि मानिसले नै गर्छ । मानिसले नै गरिब बनायो, मानिसले नै धनी बनायो अनि यी सबै कुरा हामीले सिकेका छौँ । के हामीले जीवित छौँ भन्ने कुरालाई बुझेका छौँ ? हाम्रा लागि कुनै पनि चीज स्थायी छैन । एक दिन उठ्यो, मुड ठीक छ । अर्को दिन उठ्यो, मुड राम्रो हुँदैन । कहिले आफ्नो परिवारको बोझले हैरान हुन्छौँ त कहिले आफ्नो कामबाट अनि कहिले आफ्नो शरीरका कारण आजित हुन्छौँ ।
मनमा बुझ्ने क्षमता छैन । मन त चीज नै यस्तो हो जसमा बुझ्ने क्षमता नै छैन तर हृदयले बुझ्न सक्छ । किनभने, मनका लागि अनुभव नामको कुनै चीज नै छैन । उदाहरणका लागि तपाईं कतै गइरहनुभएको छ अनि यस्तो केही घटना भयो जसका कारणले तपाईंलाई रिस उठ्यो । तपाईंको मनले भन्यो– यो राम्रो होइन । तपाईंलाई रिस उठ्यो । मनले नै रिस उठाउँछ । जब तपाईं क्रोधित हुनुहुन्छ तब तपाईं चिच्याउन, कराउन थाल्नुहुन्छ । जे गर्न मन लाग्यो त्यो गर्नुहुन्छ । त्यसपछि तपाईंलाई रिसाउनु ठीक होइन रहेछ भन्ने लाग्छ । यदि मनमा बुझ्ने क्षमता भएको भए उसले त यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भनेर बुझ्थ्यो । के जीवनमा हामी एक पटक मात्रै रिसाएका छौँ ? होइन । रिसाउँछौँ अनि बिर्सन्छौँ, फेरि क्रोधित हुन्छौँ तर फेरि पनि बिर्सन्छौँ । मनलाई सम्झाउने कि हृदयलाई सम्झाउने ! किनभने, मानिसमा दुईओटा कुरा हुन्छ– एउटा त्यो हो जहाँ उसको मनको राज्य हुन्छ अनि अर्को त्यो हो जसमा उसको हृदयको राज्य हुन्छ ।
यदि प्रेम गर्नु नै छ भने आफ्नो हृदयसँग प्रेम गर्नुहोस् । जसले यो श्वास, यो जीवन, त्यो शक्तिसँग प्रेम गर्न चाहन्छ जुन शक्तिका कारण सबैथोक हुन्छ, ऊ धन्य हुन्छ । यो हृदयको इच्छा हो । मनको इच्छा के हो ! मनले त्यो शक्ति, ती सृष्टिकर्ताका बारेमा न त बुझ्छ न बुझ्न नै सक्छ । मन त बदलिरहन्छ र सारा संसार तल्लीन छ त्यो मनलाई बुझाउनका लागि, उसलाई शान्त अर्थात् खुसी तुल्याउनका लागि । तथापि, कोही यस्तो मानिस नै छैन जसको मन खुसी होओस् । मनका लागि हरेक चीज बदलिन्छ । मनका लागि कुनै पनि कुरा स्थायी छैन ।
कतिपय मानिसहरूले आफ्नो हृदयको आवाजलाई कसरी सुन्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्छन् । हृदयको आवाजलाई सुन्नका लागि मनको आवाजलाई घटाउनुपर्छ किनभने मनको आवाज तीखो छ । यो त्यस्तै कुरा भयो– रेडियो बजिरहेको छ अनि कसैसँग कुराकानी गर्नुपर्ने भयो भने के गर्नुपर्छ ! यदि तपाईं फोनमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ र यस्तो ठाउँ छ जहाँ ठूलो–ठूलो आवाज आइरहेको छ भने बाहिरको आवाजलाई कुनै तरिकाले घटाउनुपर्ने हुन्छ । यदि बाहिरको आवाजलाई कम गर्नै सक्नुहुन्न भने कतै त्यस्तो स्थानमा जानुपर्ने हुन्छ जहाँ यत्तिको धेरै हल्ला हुँदैन जसले गर्दा तपाईं आफ्नो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ । हृदयको आवाज सुन्ने कुरा पनि यस्तै हो । हृदयले त तपाईँसँग केही भनिरहेको छ अनि सदैव भन्दै आइरहेको छ र भनिरहनेछ । तर, मनको आवाज जसको ध्वनि यति धेरै चर्को भइरहेको छ त्यसैलाई हामी सुनिरहेका हुन्छौँ ।
हामीले वास्तवमा के बुझ्नुपर्छ भने यो आफ्नो मनको आवाजलाई केही शान्त पार्नुपर्छ जसले गर्दा हामीले आफ्नो हृदयको आवाजलाई पनि सुन्न र बुझ्न सक्छौँ । हाम्रो हृदयले हामीलाई के भनिरहेको छ ! त्यसका लागि केवल यही गर्नुहोस्– “तपाईंभित्र श्वास आइरहेको छ अनि गइरहेको छ । यसलाई बुझ्नुहोस् । आफ्नो जीवनलाई सफल पार्नुहोस् । तिनलाई प्रेम गर्नुहोस् जो तपाईंको हृदयमा बसेका छन् ।” हृदय त चीज नै त्यस्तो हो किनभने यो हृदयमै ती सृष्टिकर्ता बसेका छन् । जसको ध्वनिलाई सुन्नका लागि अन्य क्षेत्रको आवाजलाई घटाउनु आवश्यक हुन्छ ।
जस्तो कुनै बच्चा जब ऊ बजार जान्छ, ऊ मेलामा जान्छ अनि खेलौनातिर हेर्न थाल्छ । खेलौनामा हेर्दाहेर्दै उसले आफ्नो आमाबुवाको हात समातिरहेको छु या छैन भन्ने कुरा नै भुल्छ । मानिसले पनि सृष्टिकर्तासँग यस्तै व्यवहार गरिरहेको हुन्छ । यो मेलारूपी संसारमा हराएर उसले सृष्टिकर्तालाई पनि बिर्सन्छ । मनको संसार त निर्माण भइरहेको छ तर हृदयको संसार कहाँ छ ! हृदयका लागि कुनचाहिँ संसार छ ? आफ्नो जीवनमा, यो जीवनमा यो हृदयको संसार पनि त निर्माण गर्नुहोस् । जुन दिन तपाईँ यो जगत्मा आफ्नो हृदयको संसार निर्माण गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो खेलौनातिर पनि ध्यान दिनुहुन्छ जुन हृदयका लागि ग्राह्य छ त्यही खेलौनाले यो सारा संसारलाई रचना गरेको छ । हृदय त्यतातिर दौडिन्छ । त्यो नै उसको खेलौना हो । ऊ त त्यसैका साथमा खेल्न चाहन्छ । जब यसबारेमा निर्णय लिनुहुन्छ नि तब अरू के चाहिन्छ जीवनमा ! त्यसपछि त्यतातिर पनि मोडिन सुरू गर्नुहुनेछ ।